Iyo HomePod inosvika kuChina kutanga kwegore rinouya | IPhone nhau
Kubva kuvhurwa kwayo zviri pamutemo, iyo HomePod yave yevashandisi vazhinji veApple chigadzirwa chitsva chekambani chinofanirwa kuve, hongu kana hongu, pamashefu avo. Sezvo mwedzi yakapfuura, Kuwanikwa kwePodPod kumba kwawedzera asi nanhasi, haisati iri mumusika mukuru pasi rose weApple: China.
Apple nezuro yakagadzirisa webhusaiti yekambani kuChina nekuHong Kong kuzivisa vateveri vekambani izvozvo Iyo HomePod ichakurumidza kuve mumatunhu ese ari maviri kutanga kwegore rinouya. Yazvino software yekuvandudza yeiyo HomePod yatove nekutsigira kwenzvimbo mbiri idzi.
China ndiyo yave musika mukuru weApple, asi mumwedzi ichangopfuura, maasia eAsia akadai saHuawei kana Xiaomi, vari kudya pasi nekukurumidza, chimwe chinhu icho Apple inoda kudzivirira kuyedza kusunga vashandisi nemidziyo mitsva, senge mune ino kesi HomePod.
Muese China neHong Kong, iyo HomePod inowanikwa mune chena uye nzvimbo grey. Iko HomePod mutengo muChina ichave RMB 2.799, nepo kuHong Kong ichave HK 2.799. Kana tikashandura ikava mari yatinoziva zviri nani, tinoona sei mutengo wekupedzisira uchave $ 358$ 9 kupfuura mutengo uri muUnited States, kwatinofanira kuwedzera mutero wedunhu rega rega.
Iyo HomePod yakatanga kuvhurwa muUnited States, United Kingdom, neAustralia munaKukadzi gore rino, ichizowedzera kuCanada, France neGerman. Kubva muna Gumiguru apfuura, inowanikwawo muSpain neMexico. Hatizive kuti nei Apple iri kutora kuwedzera kwePodPod mune dzimwe nyika zvishoma nezvishoma, asi inogona kunge iine chekuita nekugona uye mashandiro ayo Siri anopa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Iyo HomePod inosvika kuChina kutanga kwegore rinouya